मीराको महावेग- फिचर - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन ६, २०७३ सजना बराल
काठमाडौं — वि.सं. २०७२ लाई फर्केर हेर्दा मुटु अझै काँप्छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको भयावह अवस्था । र, नाकाबन्दीले निम्त्याएको अभावको भुँमरीमा रिङ्गीरहँदा ‘मीरा राई’ भन्ने नाम सुनियो, अलि चर्कै गरी । उनले फ्रान्समा भएको ८० किलोमिटरको विश्व म्याराथनमा पहिलो स्थान हासिल गरेकी थिइन् । रेडियो/टीभीले उनकै नाम फुके ।
मीराको जितले नेपालीको मलिन अनुहार उजिल्याइदिएको थियो । पीडै–पीडा खेपिरहेका बेला त्यो जित आशा जगाउने सानो आधार बन्यो । अल्ट्रा धाविका मीरालाई पनि जीवनका अनेक सफलतामध्ये त्यो बेलाको उपलब्धि खास लाग्दो रहेछ । ‘सबै निराश थिए, चिन्तित थिए,’ उनले भनिन्, ‘मैले दौड जितेको खबरले देशमा थोरै भए पनि खुसी ल्याइदियो । यो सम्झिँदा गर्व लाग्छ ।’
२७ वर्षे मीराले गर्व गर्न लायक अर्को उपलब्धि पनि हासिल गरेकी छन् । केहीअघि मात्र उनलाई ‘एड्भेन्चर्स अफ द इयर–२०१७’ अवार्ड विजेता घोषणा गरियो । नेसनल जियोग्राफी च्यानलले प्रदान गर्ने उपाधिको मनोनयनमा विश्वभरबाट १० साहसिक व्यक्ति छानिएका थिए । त्यसमा मीराले सर्वाधिक मत पाइन् । ‘यो जितले मलाई अरू अवसरहरू प्रदान गर्ला अब,’ हँसमुख मीराले सुनाइन्, ‘भाइबहिनीहरूका लागि नयाँ–नयाँ बाटो खुल्ला ।’
यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिको लामो सूची छ मीराको नाउँमा । व्यक्तिगत पोर्टल र विकिपेडियामै पनि उनले कहिले र कहाँ–कहाँ खेलिन् भन्ने जानकारीसहितको टाइमलाइन उपलब्ध छ । धेरैजसो प्रतियोगितामा उनी अब्बल देखिएकी छन् । चाहे त्यो सन् २०१४ को मुस्ताङ ट्ेरल रेस होस् या हङकङको एमएसआईजी एचके ५० किमि सेरिज वा इटालीको बार्रो स्काइनाइट !
‘हामी खेलाडीहरूका लागि त्यति धेरै प्लेटफर्म छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अझ साहसिक खेलबाट नेसनल जियोग्राफीजस्तो ठूलो संस्थाले दिने अवार्डको नोमिनेसनमा पर्नु मेरा लागि अकल्पनीय थियो । रियल्ली अनएक्स्पेक्टेड !’ यो नचिताएको वा नदेखेको सपना पूरा हुनुमा उनी आफ्नो मिहिनेत, सकारात्मक सोच र गुरुहरूको मार्गनिर्देशनलाई बढी जस दिन्छिन् ।
मीराको मुखबाट निस्किरहने एउटा शब्द हो, चान्स । चान्स अथवा अवसर पाउनु भनेको आधाउधी जित्नु हो । उनलाई राम्ररी थाहा छ, चान्सका बेला डान्स गर्न जान्नुपर्छ । उनले चान्स पाउन कति लड्नुपरेको थियो, कति व्यवधान खेप्नुपरेको थियो । अनि पाएको चान्स नगुमाउन के मात्र गरिनन् ? खाइ/नखाई कुदिनन् कि, ज्यानकै बाजी थापिनन् कि ? ‘खुट्टा तान्ने त कति हो कति नि,’ उनले भनिन्, ‘कसो–कसो फुत्किएर इटाली जान पाएँ । त्यहाँ दौड जितेपछि अरू बाटा खुल्न थाले ।’
दौडको अघिल्लो दिन मात्रै इटाली पुगेकी मीरालाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल कसैगरी जित्नु थियो । जितले नयाँ अवसर दिलाउँछ भन्ने लागेछ । तर, अनिद्रा र पहिलो पटक विदेशी संसार देख्दाको नौलो आभाष सँगाल्दै दौडिनु पर्‍यो, जुन सहज थिएन । उनकै शब्दमा– ‘इट वाज नट इजी’ ।
अग्ला र ठूला कदका विदेशी प्रतियोगीमाझ फुच्ची मीरा पुतलीझैं फुरफुर कुद्दै थिइन् । छेउछाउमा ‘गोर्खा’ भन्दै चिच्याएको सुनेपछि जोस झनै बढेछ । नभन्दै ५७ किलोमिटरको ‘सेलारोन्डा ट्रेल’ ६ घण्टा ३६ मिनेट ३० सेकेन्डमा पार गरेर उनले कीर्तिमानसहित रेस जितिन् ।
‘प्लेनको थकाइ मेटिएकै थिएन,’ अनुभव सुनाउँछिन्, ‘झुप्प–झुप्प निदाउँदै कुद्दा पनि जितेछु । गुरुहरू नै छक्क पर्नुभयो ।’ दोस्रो पटक इटालीकै ‘ट्ेरल डेगली इरोइ’ मा पनि उनले सबैलाई उछिनिन् । ८३ किमिको उकाली–ओराली ९ घण्टा १६ मिनेटमा कुदेर भ्याएकी थिइन् । एमएसाआईजी हङकङ ५० किमि दौडमा मीरालाई कसैले हराउन सकेन । हङकङकै एमएसाआईजी भर्टिकल किलोमिटरमा पनि उनी प्रथम भइन् ।
सन् २०१४ को सेप्टेम्बरबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन थालेकी उनले चार महिनाभित्रै आधा दर्जन दौडमा आफ्नो कौशल देखाइन् । दुई वर्षमा विश्व प्रसिद्ध बनिन् । यतिबेला जताततै उनको ख्याति छ । यति छोटो अवधिमा यस्तो सफलता विश्व खेलकुदमा जादूयी मानिन्छ ।
भाग लिएका अधिकांश खेलमा मीरा पहिलो भएकी छन् । चान्स पाएपछि शतप्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ उनलाई । यसरी शतप्रतिशत दिने क्रममा उनले घुँडाको दुखाइलाई भने सधंै बेवास्ता गरिरहिन् । धन्न ! सन्तुलित आहार र शारीरिक कसरतले चोट पेचिलो बन्न दिएन । तैपनि तीनवटा शल्यक्रिया त गर्नैपरेछ । इटालीको भेरोना अस्पतालमा च्यातिएको लिगामेन्ट (एसीएल टियर) जोडियो । अहिलो फिजियो, योग र अनेक कसरत गरेर त्यसलाई तन्दुरुस्त पार्दैछिन् । आखिर खुट्टा नै हो उनको हतियार, ठीक त पार्नै पर्‍यो ।
‘चान्स पाएको बेला घुँडा दुख्यो भनेर नखेलेको भए म यो स्थानमा कहाँ आइपुग्थेँ र ?’ उनले हाँस्दै भनिन्, ‘चान्स भनेको खोलामा बगेको पातजस्तै हो । समयमा टिपेन भने बगेर कहाँ जान्छ कहाँ ।’
अङ्ग्रेजी पढ्दै, बाटो खन्दै !
जता फर्किए पनि अङ्ग्रेजी नै चाहिने भएपछि यी भोजपुरे चेली हिजोआज धमाधम अङ्ग्रेजी सिकिरहेकी छन् । ‘पहिले–पहिले त नेपालीमै पनि बोल्न आउँदैनथ्यो’ भन्ने उनी अचेल अङग्रेजी मिसाउँदै देश–दुनियाँ ‘फाँड्छिन्’ । विश्वलाई शासन गरेको बेलायतमा पनि दौडिएकी उनी अहिले संसारकै शक्तिशाली अमेरिका पनि पुगेकी छन्, जहाँ अंग्रेजी भाषाकै रवाफ छ । उनी बिर्सेर पनि विदेशमा भुल्न भने चाहन्नन् । ‘नो वे, म उतै बस्ने गरी कहिल्यै विदेश जान्नँ,’ उनले प्रस्टै बोलिन्, ‘एउटाले साखा बिराउँछ भन्छन् । म विदेशमा बस्यो भने अरू भाइबहिनीहरूलाई ‘तिमीहरू पनि मीराजस्तै विदेशमै बस्ने होला’ भनेर दौडका लागि समेत भिसा नदेलान् ।’ ट्रेल रनिङको कुनै आधिकारिक संस्था नभएकाले यसै पनि नेपाली खेलाडीलाई भिसाको ठूलै समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।
भोजपुर–दुम्मामा मीराका एक भाइ–बहिनी छन् । दाजु–भाउजू झापामा । उनले अघिदेखि उल्लेख गरेका ‘भाइबहिनी’ साक्खे हुन् कि देशका अरू केटाकेटी ? प्रश्न सुनेपछि उनी ट्वाँ परिन् । ‘मेरा लागि सबै बराबर, सबै साक्खे,’ उनले भनिन्, ‘जसले राम्रो गर्छ उसलाई अवसर दिनुपर्छ । मेरो बोस, विदेशी भएर पनि मलाई चान्स दिइरहनु भएको छ । हामीचाहिँ आफू–आफूमा भेदभाव गर्छौं । राम्रो गर्नेलाई अवसर दिन पाए मीरा राईहरू थपिँदै जान्छन् ।’
आफूले ‘लिडर’ वा ‘बोस’ मानेको रिचार्ड बुल भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएदेखि मीरालाई पर्नु पीर परेको छ । उनका अनुसार बुल नेपालमै बसेर मीराजस्ता अन्य प्रतिभालाई माथि उठाउन चाहन्थे । तर, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । आफूलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने मान्छेलाई सहयोग गर्न नसक्दा उनी छटपटाएकी छन् । ‘जतिसुकै राम्रो खेल्ने भए पनि खेलाडी एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ उनले स्विकारिन्, ‘उसलाई राम्रो लिडर चाहिन्छ । लिडरले व्यवस्थापन र अन्य चीजबिजको जिम्मा लिइदिएपछि मात्रै खेलाडीले ढुक्क भएर खेल्न पाउँछ ।’
खेलकुदको आउँदो पुस्ताले हजार समस्यासँग जुध्नु नपरोस् भन्ने इच्छा छ मीराको । आफूले आर्जेको ज्ञान र सीप भाइबहिनीलाई बाँड्न चाहन्छिन् । ‘हुन त आई एम भेरी स्मल, तैपनि अहिलेसम्म बटुलेको अनुभव बाँड्ने रहर छ,’ साइकलमा सरर काठमाडौं चहार्ने मीराले भनिन्, ‘भाइबहिनीले सजिलै खेलेको हेर्न पाए हुन्थ्यो । त्यसका लागि म आफैँ पनि बाटो खन्दैछु । एउटा रुट बनाइदिन पाए तिनलाई सहज हुने थियो ।’
मीरा काठमाडौं आएको झन्डै आधा दशक भयो । उनकी वृद्धा आमाले चाहिँ राजधानी देखेकी छैनन् । बा–आमालाई काठमाडौं घुमाउने धोको छ जेठी छोरीको । यही हिउँदमा बोलाउन चाहन्थिन् । तर, मरेकाट्टे भ्याइनन् । आफू भने बेलाबखत गाउँ फर्किन्छन् । सानो छँदा जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै लाग्छ गाउँ, विकट । फरक यत्ति हो, अहिले कानमै गोली चलेको आवाज सुनिँदैन ।
माओवादी–सेनाको दोहोरो भिडन्तको बीचमा पर्दाको त्यो डरलाग्दो अवस्था भने हिजो भोगेजस्तै लाग्छ मीरालाई । ‘पुरानो कुरा सम्झिँदा रोइहाल्छु’, मीराको बब्ली फेस तुरुन्तै ग्लुमी बन्यो, अनि आँखा मिच्दै कुरा थपिन्, ‘के–के भोगियो, भोगियो सानैमा ।’ घर र समाजको स्थिति नाजुक थियो, छोरीका लागि अवसर शून्य थिए । जसोतसो स्कुल पढ्दै गरेकी उनले (माओवादी) पार्टीमा लागेपछि अनेक अवसर पाइन्छ भन्ने सुनिन् । अनि, चुपचाप घर छाडेर हिँडिन् ।
झन्डै तीन वर्षसम्म छोरीको अत्तोपत्तो पाएनन् अभिभावकले । चाल पाएपछि उनको कदमप्रति आक्रोश देखाएनन् । ‘मेरा बाबा–आमाले पढ्नु भएको छैन तर शिक्षित हुनुहुन्छ,’ मीरा भन्छिन्, ‘मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुभयो । मेरो काममा विश्वास गर्नुभयो ।’ १४ वर्षको उमेरमै पार्टीमा लागेकी उनले बन्दुक पड्काउन, मोर्चामा होमिन सिकिन् । खेलकुद सिकेको पनि जनआन्दोलन २०६२–६३ पछि सिन्धुली शिविरमै हो । यी भन्दा ठूलो कुराचाहिँ निडर हुन जानिछन् ।
सेना समायोजनका क्रममा राष्ट्रसंघीय मिसनले उनलाई अयोग्य घोषित गर्‍यो । उनको उमेर पुगेन । जंगलमा छँदा बढेको मनोबल स्वाट्टै घट्यो । घरको हालत सम्झिइन् । भक्कानो फुट्यो । अनि शिविरबाट सोझै काठमाडौं आइन्, मलेसिया जाने सोचले । त्यही बेला बालाजु कराँते डोका गुरु धु्रवविक्रम मल्लसँग भेट भयो । शिविरमा छँदै मीराको खेल देखेका मल्लले उनलाई मलेसिया जान दिएनन् ।
‘गुरु त्यसै गुरु हुँदैन रहेछन्,’ मल्लकै घरमा बस्ने गरेकी मीराले भनिन्, ‘चेलाको सीप जाँच्ने खुबी हुँदोरहेछ उहाँहरूसँग । ध्रुव गुरुले मलाई नै थाहा नभएको मभित्रको प्रतिभा उजागर गरिदिनुभयो । उहाँले नरोकेको भए अहिले आफू मलेसियाको कुनै कम्पनीमा मजदुरी गर्दै हुने थिएँ ।’ भिसा लागेर पनि उनलाई रोकेका मल्लले काठमाडौंमा बस्ने/खाने व्यवस्था मिलाइदिएका थिए ।
सेना समायोजनमा हटाइएका पुराना कामरेडहरूसँगको उनको दोस्ती टुटेको छैन । कहिलेकाहीँ भेटघाट हुँदा कामरेडहरू मीरालाई जिस्काउँदा रहेछन्, ‘यो सिँगाने लडाकु अहिले सेलिब्रिटी भई । ऊ बेला सिँगान पुच्छ्दै कुद्थी ।’ मीरा अझै कुद्न चाहन्छिन् । कुद्ने रहर पूरा भएको छैन । स्वर्णपदक जित्नु’ छ । अनि आफूजस्ता धेरै दिदी–बहिनलाई कुदाउनु छ । ‘हामी पहाडमा जन्मेका, किसानका सन्तानलाई उकाली–ओरालीमा दौडिन के ठूलो कुरा छ र ?’ विदेशीले पैसा तिरेर गर्ने अभ्यास हामीकहाँ स्वस्फूर्त हुने गरेको उनले बताइन् ।
विश्व खेलकुदकै महाकुम्भ हो, ओलम्पिक । यसमा पदकका लागि ट्रयाक र सडकमा दौडनुपर्छ । विश्व खेलकुदमा सफलताको आधार ओलम्पिकलाई नै मानिन्छ । तर मीराको स्पर्धा यसमा पर्दैन । ‘मेरो बाटो अर्कै भयो, यसैमा रमाइरहेकी छु, रोडमा दौडने चाहना छैन,’ उनले भनिन् । साहसिक दौडमा मोटो रकमको पुरस्कार हुन्न । कसरी चल्छ त जीवन ? ‘मागेरै चलिरहेको छ,’ उनले हाँस्दै भनिन्, ‘सफलता हात पार्न थालेयता प्रायोजक पनि पाएकी छु ।’ उनले पुरस्कार/सम्मानका पैसा जोगाएर झापामा जग्गा जोडेकी छन् । बेलायतमा बस्ने नेपालीहरूले उनलाई सम्मानस्वरूप अघिल्लो महिना २८ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए । ‘यो पैसा कुखुरा फार्ममा लगानी गर्दैछु,’ उनी भन्छिन्, ‘भविष्यका लागि पनि जोहो त गर्नैपर्‍यो !’
थुम्काहरू नाघ्न बालखाकै कसरतले साथ दियो । त्यो कसरतलाई अन्य खेलमा पनि परीक्षण गर्दैछिन् अचेल । उनी क्लाइम्बिङमा पनि पारंगत छिन् । उनलाई बाँदरझैं पाखा–पाखा, रूख–रूख कुदेको याद आउँछ । ‘मैले जस्तो कसरत गर्ने महिला देशभरि कति छन् कति,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता साहसी खेलमा नेपालले राम्रो गर्न सक्ने चान्स धेरै छ ।’ राम्रो गर्ने छाँट देखेरै उनले जुम्लाका सुनमाया बुढा र पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेलाई अवसर दिएकी हुन् । हङकङमा पुसमा भएको स्काइरनिङ एसियन च्याम्पियनसिपमा सुनमाया पहिलो नै भइन्, जुन तीन वर्षअघि मीराले जितेकी थिइन् ।
मीराले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै कुदेको स्पेनमा हो । लगातार १३ घण्टा कुदेर ११० किमिको अल्ट्रा पिरिनेउ पूरा गर्दासमेत उनले थकाई महसुस गरेकी थिइनन् । अहिले उनी घुँडा कहिले सञ्चो होला र फेरि बेपत्ता दौडौंला भन्ने आशामा छिन् । उनले कामको सूची लामै बनाएकी छन् । तर, उनको प्रमुख लक्ष्य एउटै छ, अझै कुद्ने, कुदिरहने– ‘आई जस्ट वान्ट टु रन, रन, रन...।’
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ २१:११
चुरे उत्खननप्रति राष्ट्रपतिको चिन्ता
गुरुयोजना मन्त्रालयमा थन्कँदा संरक्षणमा कठिनाइ
फाल्गुन ६, २०७३ जगदीश्वर पाण्डे
काठमाडौं — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवसायीको प्रभावमा सरकारले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतका निर्माण सामाग्री उत्खनन् गरि नदीजन्य पदार्थ निकासी फुकुवा गर्ने गृहकार्य गरिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई त्यसो नगर्न सचेत गराएकी छन् ।
सरकारले चुरे क्षेत्रको अत्याधिक दोहन भएको भन्दै २०७१ साउनदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतका निर्माण सामग्री निकासी रोकेको थियो । तर वनमन्त्री शंकर भण्डारी र वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित मिलेर यसअघिको निर्णयलाई उल्टाउने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार आफ्नै निवासमा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुलाई बोलाएर दोहन नगरी संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेकी हुन् ।
‘चुरेसँग हाम्रो जीवनको आधार जोडिन्छ । यो हाम्रो संस्कृति हो,’ राष्ट्रपतिले भनिन्,‘यसलाई दोहन गर्नु हुन्न ।’ राष्ट्रपतिले वनमन्त्री भण्डारी र वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी, दुवै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष विजेन्द्र यादव, निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर खानाल, संसदको वातावरण समितिका केहि सदस्य, विज्ञ र केहि वातावरणसँग काम गर्ने संस्थाहरूका प्रतिनिधिलाई पैसाभन्दा वातावरण महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयकी विकास मामिला हेर्ने सल्लाकार विमला राई पौडेलका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले वातावरण विनाश गर्दा क्षणिक फाइदा भए पनि दीर्घकालिन रुपमा वातावरणमा गरेको लगानी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले भनिन्,‘चुरे हामी सबैको साझा सम्पक्ति हो । अहिले हामीले यसलाई संरक्षण नगरे हाम्रा पिढीले के गर्छन् ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अवसरमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिले गरिरहेको काम र यसमा देखिएका समस्याको बारेमा अध्यक्ष विजेन्द्र यादवसँग जानकारी लिएकी थिइन् । यादवले समितिले तयार पारेको २० वर्षे गुरुयोजना वन मन्त्रालयमा थन्केर बस्दा काम गर्न गाह्रो भएको जानकारी गराएका थिए । यादवले उक्त अवसरमा चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालिन योजना अभाव, एकीकृत ऐन अभाव र नदी जन्य पदार्थको उत्खनन/संकलन तथा क्रसर उद्योग संचालनको नियमन तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा समस्या रहेको प्रष्ट पारेका थिए ।
कार्यक्रम अन्तरगत तराई र चुरे क्षेत्रका ३३ जिल्लाबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायत सामग्रीको जथाभावी उत्खनन, दोहन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तराई र चुरेको भूभागलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरि त्यसको क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति पनि बनाइएको थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले खोला नदी किनार, राजमार्ग, पुल मठ मन्दिर, सम्पदा, निकञ्ज आरक्षणलगायतको ५ सय मिटरसम्म क्रसर सञ्चालनका साथै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव गरेको हो । अहिले सरकारले ५० मिटर मात्र कायम गरेर नया निर्णय गर्ने गृहकार्य गर्दैछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसै अवशरमा आफ्नो कार्यालयबाट विज्ञ र स्वकीय सचिव सम्मिलित एक टोलीले २०७३ माघ ३० देखि १४ सम्म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लाहरु मध्ये सर्लाही, धनुषा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भई अवलोकन गरि प्रभाव, असर र चुनौतिका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको संक्षिप्त निचोड बारे सम्पूर्णलाई जानकारी समेत गराएकी थिइन् ।
उक्त भ्रमण टोलीले तयार पारेको निचोडमा चुरे क्षेत्रमा र चुरेबाट बगेका नदी किनारामा अनियन्त्रित ढुंगा, बालुवा गिट्टीको उत्खनन् हुँदा वातावरण अझ जोखिम पूर्ण बन्न सक्ने देखिएकोले यसलाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा वैज्ञानिक र दिगा अनि सुरक्षित मात्रामा संकलन र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भनिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी सामु वन मन्त्री भण्डारीले भने भएका सामग्रीहरुको प्रयोग गर्दा गलत नहुने कुरा घुमाउरो पारामा राखेका थिए । निवर्तमान अध्यक्ष खनालले चुरेको दोहन गर्न कुनै पनि हालतमा नहुने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार खनालको अभिव्यक्तिलाई लिएर वन्त्री भण्डारी रिसाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले अन्त्यमा चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सहभागि सबैलाई आग्रह गरेकी गरिन् ।